Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mitady ho tapaka ny tady | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mitady ho tapaka ny tady
Very hevitra ny vahoaka, samy manao sintona mahery ny roa tonta, andaniny moa ireo manambana ny tsy fandraisana anjara izany hoe fampikorontanana ny fifidianana, ankilany kosa ny mpikarakara ny fanatanterahana ny fifidianana izay miziriziry tsy anao an’ireo fanavaozana takin’iretsy manakina pitsopitsony
amin’ny rafitra efa voaomana. Ny olona dia feno ahiahy mahita an’izany, raha samy mampiasa hery amin’ny fampisintonana tsy misy fetra tapaka ny tady no hiafarany. Inona indray no hitranga ? Asa izay manantena hahita tombotsoa raha toa rava indray ny fotoam-bita anaovana ny fifidianana ? Moa koa anefa hiteraka soa ny fifiadanana raha aroso ao anatin’ny korontandrotana ny fanaovana azy ? Dia krizy indray ve no vokatra, sarotra ity ny safidy androso maty raibe ihemotra maty renibe ! Tsy hita ho lazaina na izany aza fa voahozona ny nosy sy ny mponina, ny fitsipahana manakana ny fanaovana lalao ny raharaha pôlitika no efa sady tsy ampy ifehy ny famiravirana no mbola tsy misy koa ny fepetra entina ampiharana amina fomba entitra ny kely efa eo. Mazava anie fa ny tsy fanajana lalàna no mampitondra takaitra ny firenena, izay iray tonga eo amin’ny fitondrana toa samy manodikodina ny lalàna arakarak’izay mahasoasoa azy. Noho izany raha mbola tsy misy ny fefy manakana ny fitondrana mikasika ny fanaovany ny lalàna ho fitaovana na kilalao eo ampela-tanany dia tsy hisy ny fiovana fa ny eo hatrany no miverina sy avadibadika. Ny didy mipetraka anie dia tsy ny fahefana na ny fitondrana no mifehy ny lalàna, fa ny lalàna no mifehy azy ireo. Eo moa ny fanaovana sy fanovana lalàna, fa na momban’izany aza dia ny lalàna ihany no mifehy ny fomba sy ny fitsinjarana ny fahefana amin’ny fanaovana an’izany.
Mba tsy ho very anjavony sy ho lany fotoana amin’ny fifandirana tsy misy fiafarana, hany làlana sisa angamba dia ny firosona amin’ny fanaovana an’ity fifidianana ity. Raha toa tsy misy fahefana afaka iankinana intsony hitsara ny mety sy ny rariny, anjaran’ ny vahoaka no mitsara amin’ny alàlan’ny fifidianana an’izay ametrahany toky, ary raha toa tsapany marina fa nisy fanodikodinana ny vokatra izay tsy manambara ny marina araky ny safidin’ny maro dia amin’izay fotoana izay vao vaotery hiidina an-tsehatra izy amin’ny fanipahana ny vokatra. Ny hany fihetsiketsehana mialoha dia fanehona ny fampitandremana ataony mba hanjakan’ny safidin’ny maro.